Guddiga Difaaca Barlamaanka oo ka hadlay Xuquuqda Ciidanka – Radio Daljir
Guddiga Difaaca Barlamaanka oo ka hadlay Xuquuqda Ciidanka
Abriil 20, 2018 3:43 g 0
Xildhibaan Sadiiq Warfaa oo kamid ah Xubnaha Guddiga Difaaca Baarlamaanka Federalka Soomaaliya oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Sharciga Xaq-siinta Ciidanka ay hor geynayaan Baarlamaanka si ay u meel mariyaan.
Muhiimadda sharcigaan waxa uu ku tilmaamay in ay tahay in uu Xuquuq siinayo Ciidamada Dowladda ee da’da noqda ama Dhaawacyada sababa heer aanan shaqeyn karin uu siinayo Xuquuq.
Inta lagu guda jiro Kalfadhiga 3-aad ee Baarlamaanka ayuu sheegay in ay hor geynayaan Baarlamaanka si ay u ansixiyeen, sidaasna uu noqdo Sharci.
Xildhibaan Sadiiq ayaa Sheegay in Sharcigaan uu daba joogo Sharcigii ugu dambeeyey ee Wasaaraddii Gaashaandhigga Dowladii Dhexe ee dalka ee kala saarayay qeybta Wasaaradda Militariga iyo Shacabka, ujeedka loo keenayna ay tahay in ay dhiira-gelin u noqoto Ciidamada Dowladda si ay Xuquuqdoodu u ahaato Mid joogto ah.
Saraakiil, Qubaro Ciidan, Ciidamada Dowladda iyo Cid waliba oo arrintaan quseyso ayuu sheegay in ay hor dhigayaan isla markaana ay la tashi kala sameynayaan sidii looga saari lahaa hadii uu ku jiro qaladaad sida uu hadalka u dhigay.
Jaaliyadda Puntland ee Finland oo Hambalyo u dirtay wakiilka Puntland u Fadhiya Swedan
FT: The continuing blockade of Qatar makes no sense